Hisokatra ho an'ny besinimaro amin'ny vavahady Novambra | Vaovao momba ny dia
Mandritra ny volana Novambra ary indrindra, ny Alhambra any Granada dia hanokatra ny Puerta de los Siete Suelos ho an'ny besinimaro, tamin'ny alalàn'ny tafika Castilian niditra tao amin'ny trano mimanda Nasrid raha vantany vao vita sonia ny fifanarahana fanaterana ny fanjakana teo anelanelan'ny Sultan Boabdil sy ireo mpanjaka katolika.
Ity fisokafana ity dia manampy ireo hetsika teo aloha izay Ny filankevi-pitantanan'ny Alhambra sy ny Generalife of Granada dia nanatanteraka nandritra ity taona ity mba hahitana ireo toerana ireo izay noho ny antony fitehirizana dia mihidy amin'ny mpitsidika.. Tamin'izany no nahitan'izy ireo ny Torre de la Pólvora, ny Torre de la Cautiva, ny Torre de los Picos na ny Huertas del Generalife.
Ny vavahadin'ny rihana fito dia iray amin'ireo toerana miafina indrindra izay hitantsika ao amin'ilay trano mimanda, angamba noho ny fisian'ny angano sasany toa ilay nosoratan'ny mpanoratra Washington Irving tao amin'ilay "Tales of the Alhambra" malaza.
Na izany aza, eto ambany izahay dia manao fitsidihana fohy amin'ireo fotodrafitrasa hianarana tsara kokoa momba an'io toe-javatra manan-tantara io izay manan-danja tokoa amin'ny tantaran'ny Espana.
1 Tahaka ny ahoana ny vavahadin'ny rihana fito amin'ny Alhambra?
3 Rahoviana no afaka mitsidika an'i Puerta de los Siete Souelos ianao?
4 Mahafantatra ny Alhambra any Granada
5 Aiza no hividianana tapakila hitsidihana ny Alhambra?
Tahaka ny ahoana ny vavahadin'ny rihana fito amin'ny Alhambra?
Ilay antsoina hoe Puerta de los Siete Suelos dia natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX teo ambonin'ilay taloha ary hita eo amin'ny sisin'ny rindrina atsimo izay miaro sy manidy ny trano mimanda Nasrid. Misongadina amin'ny fahasarotan'ny firafiny, ny firavahany ary ny tsangambaton'izy ireo, toetra izay nanirian'ireo mpanjaka moorisy haneho ny heriny sy ny fahalehibiazany.
Ny endriny dia miondrika, singa mpiaro tena mampiavaka ny fotoana izay natao hanamafisana ny fiarovana, satria nanery ny fahavalo hanao fanafihana marobe hahazoana miditra amin'ny atitany.
Alohan'ny varavaran'ny gorodona fito dia bastionan'ny artillery napetraka taorian'ny fandresen'ny Kristiana. Izy io no akaiky indrindra amin'ny medina ary inoana fa mety nanana toetra amam-panao sasany izy io, satria, araka ny fitantaran'ny vanim-potoana, dia nisy ny filaharam-be sy ny miaramila teo alohany.
Nandritra ny Ady Fahaleovan-tena Espaniôla, ny tafika Napoleonika dia nanapotika azy tamin'ny alàlan'ny fihemorana avy tany Alhambra, nanapoaka azy ary koa ny sehatry ny rindrina. Tamin'ny taona 60 tamin'ny taonjato faha-XNUMX vao afaka namboarina ny varavarana tamin'ny alàlan'ny fanoratana.
Sary | YOUTUBE
Nantsoin'ny Silamo hoe Bib Al-Gudun na vavahadin'ny fantsakana izany satria tany an-tsaha teo alohany dia nisy tranomaizina izay nitazomana gadra. Ny anarany ankehitriny dia avy amin'ny finoana fa eo ambanin'ny bastion miaro azy dia misy gorodona fito ambanin'ny tany izay roa ihany no fantatra.
Rahoviana no afaka mitsidika an'i Puerta de los Siete Souelos ianao?
Mandritra ny volana Novambra, ireo mpitsidika maniry dia hanana fotoana hidirana ao amin'ny Puerta de los Siete Suelos, toerana iray nakatona matetika noho ny antony fiarovana. Ny ora dia isaky ny talata, alarobia, alakamisy ary alahady manomboka amin'ny 08:30 ka hatramin'ny 18:XNUMX. ary ilaina ihany ny mividy tapakila Alhambra General na Alhambra Gardens.
Granada dia fantatra manerana an'izao tontolo izao amin'ny Alhambra. Midika hoe mimanda mena ny anarany ary izy io dia iray amin'ireo tsangambato espaniola be mpitsidika indrindra satria ny manintona azy dia tsy ny haingon-trano anatiny ihany no manintona fa koa izy io satria trano mifangaro tanteraka amin'ny tontolo manodidina azy. Raha ny marina dia manintona mpizaha tany misy dikany izany ka natolotra ho an'ny Fahagagana Vaovao Fito manerantany aza.
Ny Alcazaba, ny Royal House, ny lapan'i Carlos V ary ny Patio de los Leones dia anisan'ny faritra malaza indrindra ao amin'ny Alhambra. Toy izany koa ireo zaridaina Generalife izay miorina eo amin'ny havoanan'i Cerro del Sol. Ny zavatra tsara indrindra momba ireo zaridaina ireo dia ny fifanatonana eo amin'ny hazavana, ny rano ary ny zava-maniry maniry.
Aiza no hividianana tapakila hitsidihana ny Alhambra?
Ny tapakila hitsidihana ny Alhambra any Granada dia azo vidiana amin'ny Internet, any amin'ny biraon'ny tapakilan'ilay tsangambato mihitsy, amin'ny alàlan'ny maso ivoho misahana ny fizahan-tany izay manana maso alàlana na an-tariby. Tsy maintsy tsiahivina fa isaky ny fitsidihana maro isan-taona ananany, ny tapakila dia tsy maintsy vidiana eo anelanelan'ny iray andro sy telo volana mialoha ny daty voafidy fa tsy azo vidiana amin'ny andro iray ihany.
Ahoana ny hevitrao amin'ny fandraisana andraikitry ny Birao Mpiambina ny Alhambra sy Generalife any Granada hahitana ireo toerana lavitra indrindra amin'ny trano mimanda Nasrid? Efa nitsidika an'ity ve ianao tamin'ity taona ity? Iza amin'ireo no tianao na tianao ho hita?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialan-tsasatra » Hisokatra ho an'ny besinimaro ny vavahady amin'ny gorodona fito ao amin'ny Alhambra amin'ny volana novambra
Gustavo Adolfo Berrios dia hoy izy:
Nahazo tombony aho nitsidika an'i La Alhambra 2 taona lasa niaraka tamin'ny fianakaviako. Toerana mahafinaritra izy io araka ny nomarihin'ny mpanoratra. Notahina aho nankalaza ny fitsingerenan'ny andro nahaterahako tao. Tena tiako ny tantarany, ny maritrano ary ny kolontsaina Moorish izay nisy fitaomana lehibe tamin'ny lafiny maro tao amin'ny Saikinosy Iberia. Tsy maintsy miverina aho raha avelan'Andriamanitra.
Valiny tamin'i Gustavo Adolfo Berrios